बिद्या र झलनाथलाई मापदण्डले रोक्यो : यसरी बन्ने भए सुबास नेम्वाङ राष्ट्रपति ! – Setosurya
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । माओवादीसँगको पद बाँडफाँटमा राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ । तर कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षले हालकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोहोर्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल आफैँ राष्ट्रपति बन्न चाहेका छन् ।अर्का पूर्व अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि खनाललाई बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
भण्डारी र बिद्या दुबैले राष्ट्रपतिको अडान नछोड्दा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढेको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनः दोहोरिने इच्छा र एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको तीव्र चाहना विपरीत नेम्वाङको राष्ट्रपतिमा सम्भावना बढेको स्रोत बताउँछ ।
सभामुख बन्नुअघि पनि नेम्वाङको राष्ट्रपतिमा नाम आएकै थियो । तर समय र परिस्थितिले विद्या राष्ट्रपति भइन् ।
विद्यादेवीको दोहोरिने इच्छा र झलनाथ खनालको पनि जिम्मेवारी आएपछि हट्दिन भन्ने लबिङका बीचमा आएका नेम्वाङले आफ्नो भनसुन तीव्र पारेका छन् । यद्यपी नेम्वाङले आफू राष्ट्रपति या मन्त्री नहुने र अझै १०,१२ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने उमेर रहेकाले तत्काल कुनै सरकारी पदमा जाने लालसा नरहेको बताउदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, कमल थापा उपप्रधानमन्त्री
प्रतिनिधी सभा सदस्य पदम गिरीले भने – ‘अवको ५ वर्षमा पर्वतले विकासको नयाँ अनुभुती पाउँछ !’
कैलालीको टिकापुरमा एमालेको अप्रत्यासित जित, उपमेयरमा कांग्रेस विजयी
हजाराैं युवाहरूलार्इ राहत दिने मन्त्री गाेकर्ण बिष्टकाे सकारात्मक कामः अबदेखि सरकारले १० हजारमा मलेसिया पठाउने
उपप्रधानमन्त्री बरियता विवाद : कमल थापा पहिलो, विमेलन्द्र निधि तेस्रो !
यसरी बन्दैछ स्थानीय तहको बजेट, असार २५ गते नगरसभा र गाउँसभामा बजेट पेश हुने